Somalia: Al-Shabaab oo weerar gaadmo ah ku qaadey Saldhigga Laanta Buur ee Shabeelada Hoose - Wargane News
Home Somali News Somalia: Al-Shabaab oo weerar gaadmo ah ku qaadey Saldhigga Laanta Buur ee...
Malayshiyaad ka tirsan ururka al-Shabaab ayaa weerar gaadmo ah ku qaadey Saldhigga Ciidamada ee Laanta Buur, gobolka Shabeelada Hoose. Laanta-buuro ayaa dhacda meel u dhaxaysa degmada Afgooye iyo halka la yiraahdo Lambar 50.
Weerarkan ayaa dhacay xalay saqdii dhexe 1:30am. Saldhigga waxaa ku sugnaa ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, gaar ahaan guutada shanaad, waxaana loo isticmaali jirey tababarada ciidanka.
Wararku waxay sheegayaan in al-Shabaab ay ku gubeen gawaari tikniko ah, isla markaana ay kaxaytseen qaar kale oo la aadeen dhanka degmada Awdheegle, oo uga beegan dhanka Galbeed.
Al-Shabaab ayaa sheegtey in ay la wareegeen Saldhigga isla markaana dileen ciidamo aad u badan, oo ay gacanta ku dhigeen Tikniko badan.
Dowladda Federaalka ayaan weli ka hadlin weerarka gaadmada ah ee al-Shabaab ku qaadeen saldhigga Awdheegle.
Weerarkan ayaa imaanaya iyada oo todobaadkan si weyn loogu mashquulsanaa furin cusub oo al-Shabaab ay ka fureen dhanka Puntland oo aysan horey awood ugu lahayn, halkaas oo si weyn loogu naafeeyey isla markaana ay baxsad ku jireen.